Turtle survival alliance: fifaninanana maka sary sokatra “radiata” | NewsMada
Karazan-tsokatra tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy ny sokatra radiata. Anisan’ny fikambanana miaro azy manoloana ny halatra sy ny fanondranana an-tsokosoko any ivelany azy ny Turtle survival alliance (TSA).
Feno 10 taona ny niasan’ity fikambanana ity eto Madagasikara, tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fikarakarana fifaninanana mamoaka sary ny sokatra “radiata”. Halefa amin’ny adiresy mailaka 2020concoursphoto@gmail.com ny fandraisana anjara, manomboka amin’ny 19 oktobra ho avy izao hatramin’ny 9 novambra 2020.
Natao ho an’ny Malagasy monina eto Madagasikara ny fifaninanana. Fepetra takina ny fakana sary sokatra radiata, mbola velona, amin’ny endriny anoloana sy ny endriky ny lamosiny. Aseho koa ny sariny mazava sy matroka ahitana tsara ny kirany. Azo atao ny mangataka fanampim-panazavana ahitana ny antsipiriany amin’ny adiresy mailaka info2020concours@gmail.com. Indray mandeha ihany ny fandraisana anjaran’ny mpifaninana iray.
Hisy ny sivana voalohany ho an’ireo 30 mendrika ataon’ny mpitsara ary hampahafantarina ny besinimaro, manomboka ny 24 novambra hatramin’ny 5 desambra. Avy amin’ireo no hisafidianan’ny rehetra ny roa mendrika farany, amin’ny alalan’ny pejy facebook-n’ny FAPBM*, miara-miombon’antoka amin’ny TSA. Hampahafantarina ny 12 desambra ny valin’ny fifaninanana ary hisy ny hetsika manokana hatao.
Fady ho an’ny Tandroy sy ny Mahafaly
Nilaza ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy, Rtoa Raharinirina Vahinala, omaly, fa misy fotoana “manan-danja kokoa ny sary iray miohatra amin’ny teny arivo”, koa ankasitrahana tokoa ity finiavan’ny TSA, hikarakara fifaninanana an-tsary ity, satria mifanandrify amin’ny toromariky ny minisitera amin’ny fikarohana serasera vaovao hiarovana ny zava-mananaina eto Madagasikara.
Nomarihin’ny Randriamahazo Herilala, talen’ny TSA Madagasikara fa fady ho an’ny foko Tandroy sy Mahafaly ny fikitihina sy ny fihazana ary ny fihinanana ny sokatra. Any amin’izy ireo, any amin’ny faritra Androy sy Atsimo Andrefana no hany ahitana ny radiata. Manodidina ny 25.000 ny sokatra tahirizina ao amin’ny foibe TSA any atsimon’ny Nosy, azo tamin’ny sokatra nangalarina na saika aondrana an-tsokosoko tany ivelany.
*FAPBM: Tahirim-bola ho an’ny faritra arovana sy ny zavamananaina eto Madagasikara.